Budata Blocky Runner APK maka Android
Budata Blocky Runner
Budata Blocky Runner,
Blocky Runner bụ mmepụta Turkish nke na-echetara egwuregwu nka Crossy Road, bụ nke na-ewu ewu na nyiwe niile, mana na-enye egwuregwu egwuregwu siri ike karị. Dị ka onye mmepụta si kwuo, anyị nọ nụlọ ochie Turkish ma na-achịkwa àgwà aha ya bụ Efe.
Na egwuregwu, nke chọrọ nlezianya anya, nlebara anya na ndidi, anyị na-ahụ àgwà anyị na gburugburu ebe obibi site nechiche nke igwefoto nelu-cross. Ebumnuche anyị negwuregwu ahụ bụ idobe agwa anyị ka anyị jiri obere nzọụkwụ na-aga nihe egwu dị na gburugburu ebe obibi. Ọ bụ ezie na e nwere lava-souting na ikpo okwu ikpo okwu, ọkụ, akụ na ọtụtụ ihe mgbochi ndị ọzọ, ndị a bụ eziokwu na anyị enweghị ike ime mmegharị dị ka na-agba ọsọ ngwa ngwa, na-awụlikwa elu ịgbapụ; Eziokwu ahụ bụ na anyị ga-eji ụkwụ agafeta mere ka egwuregwu ahụ sie ike.
A na-atụle akara anyị nwetara negwuregwu ahụ nke na-anwale ndidi anyị site nọnụọgụ usoro anyị na-eme kwa nkeji.
Blocky Runner Ụdịdị
Mmepụta: ERDEM İŞBİLEN